Sajhasabal.com |मेस्सिको टिम विश्वकपको नकआउट चरणमा पुग्ने सम्भावना अझै छ ?
मेस्सिको टिम विश्वकपको नकआउट चरणमा पुग्ने सम्भावना अझै छ ?
असार ८, काठमाडौँ | क्रोएसियाले ३-० गोल अन्तरले पराजित गरिदिएपछी अर्जेन्टिनाको नकआउट चरणमा पुग्ने सम्भावना कमजोर बनेको छ । 'समूह डी'मा पहिलो खेलमा आइसल्याण्डसँग १-१ गोलमा बराबरी खेलेको अर्जेन्टिना बिहिबार रातिको खेलमा क्रोएसियासँग हारेपछि उसको समूह चरणबाटै बाहिरिने सम्भावाना बनेको हो ।
खेल जित्दै क्रोएसियाले ६ अंक बटुल्न सफल भएको छ । समूह 'डी' अन्तर्गत आफ्नो दोश्रो खेलमा पराजित भएको अर्जेन्टिनाको लागि नकआउट चरणमा पुग्ने सम्भावना भने अझै जिवितै छ । तर बलियो टिम मानिएको आइसल्याण्डले आफ्नो बाँकी दुवै खेल जितेमा अर्जेन्टिना समूह चरणबाटै बाहिरिनेछ । तर लगातार दोश्रो खेल जितेको क्रोएसियासँग पनि आइसल्याण्डले सामना गर्ने हुँदा उक्त खेल जित्नु आइसल्याण्डको लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ । त्यस्तै यस अघिको खेलमा पराजित भएको नाइजेरियाले पनि दुई खेल खेल्न बाँकी छ, त्यसैले अब आइसल्याण्ड र नाईजेरियाको दोश्रो खेल हेरेपछि मात्र अर्जेन्टिनाको विश्वकप यात्राको आंकलन लगाउन सकिन्छ । आइसल्याण्ड र नाइजेरिया बीचको खेल आज (शुक्रबार) ८:४५ बजे हुँदैछ । खेलमा नाइजेरिया बिजयी भए त्यसको फाइदा अर्जेन्टिनालाई हुनेछ । त्यसैले अर्जेन्टिनाको नकआउट चरणमा जाने सम्भावना आइसल्याण्डको खेलमा भर पर्नेछ ।